IMEI waa gaaban caalimaiga ah ee cadaynta. IMEI waa lambar gaar ah la siin telefoon kasta oo shaqsi cell. Tani waxay sida caadiga ah ka heli kartaa oo dhinaca dambe ee batteriga taleefanka gacanta. Tirada caadiga ah waa dheer yahay shan iyo toban lambar. Isticmaalada ee IMEI on iPhone waa fudud cajiib ah. Sida cypher -Madaxweynaha IMEI u qaybsan yahay qaybaha samatabbixin macluumaadka ku saabsan telefoonka gacanta ah sida, sida ay shirkadda shabakadda mobile iyo in taleefanka gacanta waxaa lagu xirayaa. Lambar IMEI ee qalabka la xado waa la madow ee dalalka qaarkood si telefoonka ma loo isticmaali karaa qof waxaa xaday.
5 Siyaabaha Raadi IMEI Number on iPhone
Halkan waxaan u tegayaa inaan wadaagno 5 siyaabaha ugu fudud in la helo qalabka aad iPhone (2G iPhone ama 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5c, ama ugu dambeeyey 5c) tirada IMEI ahay. Halkan waxaa ay:
Xalka 1. Dial code Universal * # 06 #:
STEP-1: Si fudud u wac * # 06 # xeerkan universal aad rada garaacaysaa iPhone.
STEP-2: Tani waa sida aad ku ogaan kartaa tirada IMEI aad iPhone. Waxaad ku qori kartaa ama, si fudud u nuqul ka-paste kartaa sabuurad iPhone ee ka iPhone ayaa soo bandhigay.
Xalka 2. Check out iPhone menu:
STEP-1: Aad screen guriga iyo Settings tuubada. Hadda riix doorasho guud. Markaasay aad u baahan tahay in ay doortaan About iyo ka dib in la doorto ikhtiyaarka IMEI.
STEP-2: Tani waa sida aad u heli doonaa tiro IMEI in aad iPhone. Si aad nuqul in ka marineyso About menu, jaraa'id & qaban tirada IMEI iyo lambarka IMEI la koobiyeyn doona fariin aad iPhone.
Xalka 3. lagaa IMEI Isticmaalka Lugood,
STEP-1: Isku aad iPhone si aad u computer iyo furi Lugood dib u soo ceshano tirada IMEI ah. Dooro iPhone ka menu Device ee geeska sare ee midigta ah Lugood iyo ka dibna riix tab Kooban. Haddii aadan arki qalab iPhone aad, dooranyo ka iibsan karo kooxda View menu qari galeeysid.
STEP-2: Hadda riix reereebka Lambarka taleefoonka, xaq u socda image qalab iPhone aad. Wareegga A tusi doono oo dhan tirada qalab iPhone aad. Riix is reereebka tab Kooban, lambarka IMEI muujin doonaa dhakhsaha badan ee qalab aad.
Xalka 4. Qalabka aad rabtid ka Computer:
STEP-1: aad door bidayso u furan yihiin in windows- doortay Edit hore ka dibna aad rabtid. In Mac OS X ka dibna doortay Lugood iyo guji aad rabtid. Hadda riix reereebka Qalabka iyo qalab iPhone aad tusi doonaa. Si kastaba ha ahaatee, farta aad mouse ka badan iPhone. Waxaa idin ​​tusin doonaa lambarka telefoonka aad la leedahay tirada IMEI iyo lambarka taxanaha ee iPhone.
Xalka 5. IMEI Number From iPhone Back ama Holder SIM Card:
STEP-1: Dhamaan daydo iPhone ama aaladaha ka mid noqon doona tirada IMEI ku saabsan qalabka dhabta ah laftiisa. Search sare ee sanduuqa iPhone aad, waxaad ka heli doontaa warqad ku leh tirada IMEI aad ku yaal.
STEP-2: Haddii qalabka iPhone 4s yahay & waayeelka ah mid aad ka heli kartaa tiro IMEI ku haysta dhabta ah kaarka SIM.
Sida loo helo haddii iPhone la madow?
Iyada oo la adeegsanayo xarun madow hubinta, waxay noqon kartaa mid aad u hubiso in iPhone la wargeliyo sida madow in dareewal ama shaqaale. Tani waxay dhacdaa marka iPhone lumo ama la xado. Muddadaan telefoonka hubisaa, ma gal ah network dal gaar ah. Xaaladdan oo kale furo iPhone noqon doontaa dhibaato ama waxaa laga yaabaa in wax aan macquul aheyn. Xilligan la joogo, madow iPhone jeegga waxaa la samayn karaa oo keliya shabakadaha gaar ah ama adeeg bixiyayaasha. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la raaco talaabooyin fudud qaar ka hoos ku qoran.
STEP-1: Marka hore u doorteen wax jaangooyaha ama hubiyaha adeegyada madow aallada iPhone aad. Like- Click on this link http://www.imei.info/
STEP-2: aad saar tirada EMEI oo guji jeeg.
STEP-3: Hadda sugi kaliya 5-10 daqiiqo. Waxaad receive- doonaa liiska madow ee baaritaanka doorasho, waxa guji. Natiijada baaritaanka madow A ee way- this waxaa la muujin doonaa
Waxa kale oo aad halkan ka eegi kartaa jeegaaga iPhone madow, iPhone Softbank in Softbank Japan madow isa sudhsudhan ama halkan, in ogolaanaysaa furo website iPhone ee.
> Resource > iPhone > 5 jidadkooda Sida loo Helo IMEI on iPhone